Nolosha Finland > Caafimaadka > Caafimaadka dadka da'da ah
Haddii aad leedahay Degan Degmo ku yaalo Finland, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee dawlada. Haddii aad xanuunsatid, la xiriir rugta caafimaadka (terveysasema) ee aagaaga ku taala. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Adeega caafimaadka ee Finland.
Macluumaadka dawooyinka la xiriira waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dawooyinka.
Macluumaad ku saabsan adeegyada fududeeya nololmaalmeedka dadka da’da ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dadka da’da ah.
Haddii aad ku xanaaneyneyso ehelkaaga guriga, ka aqriso macluumaad dheeriya bogga InfoFinlandi Dadka da’da ah.
Dadka ka weyn 65 sano saddexdii qofba hal qof ayaa qaba calaamado dhinaca xusuusta ah. Markasta ma sababaan jirooyin dhinaca xusuusta ah. Mararka qaar waxaa sababi kara jiro, taas oo la daweyn karo.
Haddii aad ogoaato in adiga ama ehelkaada ay sidii hore si ka adag ugu adagtahay in uu xusuusto waxyaabaha, la xiriir rugta caafimaadka ee soonahaada islamarkaasna ballanso dhaqtar. Dhaqtarku wuxuu dhibaatooyinka xusuusta kala sheekeysanayaa bukaanka iyo haddii ay suurtagal tahay ehelkiisa, wuxuuna sameynayaa baaritaan fudud oo dhinaca xusuusta ah. Dhaqtarku wuxuu u sii gudbinayaa baaritaano dheeraad ah haddii loo baahdo.
Xasuus xumada iyo dementigaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Cudurka sokorta (Diabetes)
Nooca 2aad ee cudurka sokortu (diabetes) wuxuu ku bilaaban karaa da’ walba, laakiin inta badan da'da hawlgabka. Calaamada cudurka sokorta lagu yaqaan waxaa ka mid ah daalka gaar ahaan markii cunto la cuno kadib, oon, rabitaan kaadi badan, xanaaq, isku buuqid, caatoobid, lugo xanuun, aragtida oo daciifta iyo infekshinka si sahlan uu qaado.
Cudurka sokorta waxaa lagu daweyn karaa insuliinka iyo cunto sax ah. Haddii aad ka shaki qabto inaad cudurka sokorta qabto, waqti ka qabso dhakhtarka rugta caafimaadka ee xaafadaada ama xarunta caafimaadka ee gaarka loo leeyhay.
Wixii dheeraad ah ee la xiriira cudurka sokorta waxaad ka heleysaa Xarunta horumarinta caafimaadka iyo nolol wanaaga (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) iyo bogga internetka ururada ku bahoobay cudurka sokorta (Diabetesliitto).
Cudurka sokortaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Macluumaad la xiriirra cudurka sokortaFinnish | Iswidish
Aragtida iyo maqalka
Araga iyo maqalku dad badan waa ka xumaadaan da’da darteed.
Si joogto ah u tag baaritaanka dhakhtarka indhaha, si jirooyinka indhaha oo ay macquulka tahay inay kugu dhacaan loo helo goor hore inta ay xaaladu wax ka qabadka leedahay.
Haddii aad dreento in maqalkaado daciifay, waqti ka qabso baaritaanka maqalka ee rugta caafimaadka soonahaada ama dhaqtarka gaarka ah Baaritaanka bilowga ah kadib waxaad warqad baaritaan dheeraad ah laguugu dirayo ka heleysaa dhakhtarka, haddii loo baahdo.
Ka akhriso macluumaad dheeraad ah qofka lixaadka aragtida la’ iyo qofka lixaadka maqalka la’ qalabka caawimaadka ah ee uu isticmaali karo Lixaad la’aanta.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 16.01.2019 Boggan war-celin ka soo dir